केटाले बढि हस्तमैथुन गर्छन कि केटीले ?
Home स्वास्थ्य केटाले बढि हस्तमैथुन गर्छन कि केटीले ?
२०७५ जेठ १,
२५ देखि २९ बर्ष उमेरका युवाहरुमा गरिएको अर्को अनुसन्धानमा ८५ प्रतिशत महिला र ९४ प्रतिशत पुरुषले हस्तमैथुन गरेको पाइएको छ । यसबाट केटाहरुले केटीको तुलना बढि हस्तमैथुन गर्ने देखिएको छ । तर केटीहरुको संख्या पनि कम देखिदैन् ।
एसपीलाई ‘गुण्डा’को न्यानो स्वागत
स्तन कसिलो बनाउने तरिका